Kutheni Kunzima Ukuyeka Icuba - 802Quits
Kutheni Kunzima Ukuyeka Icuba
Yenza isicwangciso sakho sokuyeka
Fumana Uncedo Lokuyeka
Iipatches zasimahla, iGum kunye neLozenges
Izixhobo zokuyeka ukuzonwabisa
Indlela yokuLawula iMinqweno
Ikhaya » Iivenkile » Izizathu zokuyeka » Kutheni Kunzima Ukuyeka Icuba
Nangona ufuna ukuyeka, zimbini izizathu ezinokwenza ukuba kube nzima:
1.Kungenxa yokuba ukusetyenziswa kwecuba kulikhoboka kakhulu kwaye ke ayisiyo nje umkhwa, unesidingo somzimba senicotine. Ufumana ukurhoxiswa kwenicotine xa uhamba ixesha elide ngaphandle kwecuba okanye i-e-cigarette, icuba elihlafunwayo, isinemfu okanye ivape. Umzimba wakho "ukuxelela" oku xa ufumana umnqweno. Umnqweno uyahamba nje ukuba wanelise umlutha ngokukhanyisa okanye ukusebenzisa olunye uhlobo lwecuba. Yilungele ukujongana noku ngokudibanisa amabala asimahla, intshungama kunye nelogs okanye amanye amayeza okuyeka kwisicwangciso sakho sokuyeka.
2.Unokuba likhoboka lesenzo sokusebenzisa icuba. Njengokuba umzimba wakho wawukhula ngesidingo se-nicotine, wayezifundisa ukutshaya, ukuhlafuna okanye ukuvota, kwaye uziqeqesha ukusebenzisa icuba kwiimeko ezininzi ezahlukeneyo. Ezi meko zokuma zinokoyiswa ukuba uzilungiselela kwangaphambili.
Ukwazi ukuba ungathanda ukujongana njani nezinto ezinje ngezi zidweliswe ngezantsi ngaphambi kokuba ujongane nazo njengomntu ongatshayiyo kuya kukunceda uzithembe.
Ukusela ikofu okanye utywala
Ngexesha loxinzelelo, impikiswano, ukuphoxeka okanye isiganeko esibi
Ukuqhuba okanye ukukhwela emotweni
Ukuba phakathi kwabahlobo, osebenza nabo kunye nabanye abantu abatshayayo okanye abasebenzisa ezinye iimveliso zecuba
Ukuhlala kunye namaqela
I-e-cigarettes yile hayi yamkelwe yi-US Food and Drug Administration (FDA) njengesincedisi sokuyeka ukutshaya. I-E-cigarettes kunye nezinye iinkqubo zokuhanjiswa kwe-nicotine ye-elektroniki (i-ENDS), kubandakanya i-vaporizers, iipeni ze-vape, i-e-cigars, i-e-hookah kunye nezixhobo zokugcoba, zinokubhenca abasebenzisi kwezinye zeekhemikhali ezifanayo eziyityhefu ezifumaneka kumsi wecuba onokutsha.
Yintoni ekwenza ufune ukutshaya?
Bhala izinto ezibangela ukuba ucinge phantsi kwaye ucinge ngeyona ndlela yokuphatha nganye nganye. Izicwangciso-qhinga zinokuba lula, njengokuthintela iimeko ezithile, ukuba nentshungama okanye iilekese ezinzima kunye nawe, endaweni yeti eshushu okanye ukuhlafuna umkhenkce, okanye ukuphefumla okunzulu.
Ukulibaziseka lelinye iqhinga. Njengoko ulungiselela ukuyeka ukutshaya, ukuvutha okanye ukusebenzisa elinye icuba, cinga xa uhlala unomsi wakho wokuqala, uhlafune okanye uthabathe usuku kwaye uzame ukulibazisa ixesha elide. Nokuba ukulibaziseka lixesha elifutshane, kunye nokwandisa ukuba yonke imihla ukuya kumhla wokuyeka, kunokunciphisa inkanuko. Iingcebiso kunye nemibono malunga nendlela yokujongana nezi zinto zibangela, jonga Ukuhlala.
Yenza iSicwangciso sakho sokuShiya ukuKhetha
Kuthatha kuphela umzuzu ukwenza isicwangciso sakho sokuyeka ukuhambelana.
Yenza iSicwangciso sam sokuyeka>
Xa ii-802Quits zibhekisa kwicuba kule webhusayithi, sibhekisa kurhwebo, icuba elenzelwe inzuzo elenzelwa ukuzonwabisa kunye nokusetyenziswa kwesiqhelo hayi icuba elingcwele kunye nesintu elinokusetyenziselwa umsitho okanye iinjongo zonyango ngamanye amaMelika aseMelika.
© 2020 ISEBE LEZEMPILO LEVERMONT.